महिला दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाउदै तथा सघाउदै हाम्री बहिनी | दर्पण दैनिक
महिला दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाउदै तथा सघाउदै हाम्री बहिनी
प्रकाशित मिति: २०७७ असार ३ गते ०९:५४
विगत लामो समय देखि महिला दिदी बहिनीलाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउदै आएको संस्था हो, हाम्री बहिनी । यस संस्थाले एकल महिला तथा दुखमा रहेका महिलाहरुलाई विशेष सहयोग गर्दै आएको छ । अवसर पाए महिलाहरुले पनि केहि गर्न सक्छन, भन्ने धारणाका साँथ सञ्चालित संसथाले हाल काठमाडौं उपत्यकामा महिलाहरुलाई सीप र रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा दर्पण दैनिले हाम्री बहिनीकी कार्यक्रम प्रमुख सुस्मिता शर्मासँग केहि समय अगाडी गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
हाम्री बहिनी के हो ?
महिला शसक्तीकरणको लागि सञ्चालित राष्ट्रिय अभियान हो ।
हाम्री बहिनी अभियान भित्र के छ ?
यस भित्र विशेषतः महिला शसक्तिकरणको लागि चाहिने विभिन्न कुराहरु छन । महिलाई सचेत वनाएर मात्र हुदैन महिलाईलाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाउने तथा सघाउने काम हामीले गर्दै आएका छौं । आर्थिक हिसाबले महिलाहरु सबल नभएसम्म शसक्त हुन सक्दैनन , त्यसकारण महिलाहरुको लागि रोजगारीको अवुर सृजना गर्ने तथा रोजगार हुन आवश्यक पर्ने सीपमुलक कुराहरुमा पनि हामीले सघाउदैं आएका छौं ।
काठमाडौंमा बसोबास गर्ने दिदी बहिनीहरु, जसले रोजगारी खोजिराख्नु भएको छ । जसलाई आफ्नो घरपरिवार चलाउन समस्या भएको, जसले काम गरेर आत्मनिर्भर बन्छु भनेर खोजि गरिराख्नु भएको छ । जसले घरायसी कामलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई रोजगारीको सृजना गर्ने काम हामी गछौं । त्यसैगरि, विभिन्न समयमा काउन्सिलिङ गर्ने, हामीसँग जोडिएका विभिन्न डांक्टरहरुबाट महिलाहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखिए उपचारमा पनि सघाउने, त्यस्तै कानुनी परामर्शको कुराहरुमा पनि हाम्री बहिनी सघाईरहेको हुन्छ । त्यो बाहेक हाम्ी सँग जोडिएका दिदी बहिनीहरुका बच्चाहरुलाई अति गरीब तथा जेहेन्दार तथा मिहेनेती छानेर छात्रवृतिको समेत व्यवस्था गर्ने गरेका छौं । अपठ्यारोमा परेका दिदी बहिनीहरुको साहारा बनेको छ हाम्री बहिनी ।
हाम्री बहिनी मार्फत कस्तो कस्तो रोजगार पाईन्छ ?
हाम्रोमा विशेष गरि हाउसकिपिङ कै काम हो । जसमा भरमा सरसफाई गर्ने, लुगा धुने, भाडा माझ्ने, बच्चा हेर्ने, सुत्केरी स्याहार सुसार तथा बृद्धबृद्धाको स्याहार सुसार, बगैचामा काम गर्ने, घर कुर्ने लगायतका काम रहेका छन । हामी यी कामहरु गर्न ईच्छुक महिलालाई सहयोग गछौं । हामीले लगाईदिने काममा सरकारी नियम अनुसार नै तलव भत्ता बैकिङ प्रणली मार्फत पाउने व्यवस्था गर्दै छौं । हामी मार्फत काममा जाने दिदी बहिनीले आठ घण्टा काम गर्दा काम हेरेर न्युनतम १० हजार तलव पाईराख्नु भएको छ, भने कसै कसैले आठ घण्टाकै २५ हजार पनि पाईराख्नु भएको छ । शनिवार विदा पनि पाईराख्नु भएको छ । त्यस्ते, दशैं बोनस को पनि कुरा छ । हामी सँग पार्ट टाइम काम गर्नेको लागि पनि अवसर छ ।
रोजगारी लगाईदिए वाफत हाम्री बहिनीले के कस्तो शुल्क लिने गरेको छ ।
यो कम्पनी प्रालि नै हो । यसले सामाजिक काम पनि गरिरहेको छ । हामी रोजगारीमा जाने दिदी बहिनीहरुबाट कुनै पनि शुल्क लिने गरेका छैनौं, तर तालिम लिनेहरुको लागि भने तालिम शुल्क रु ३ हजार लिने गरेका छौं । रोजगारदाताबाट भने हामीले रु ५ हजार लिने गरेका छौं ।
हाम्री बहिनी मार्फत हाल सम्म कति जनाले रोजगारी पाएका छन ?
हाल सम्म हामीमार्फत रोजगार हुने दिदीबहिनीहरु करिब १ हजार तीन सय भन्दा बढि छन । तर सामाजिक काम गर्न तथा अन्य अतिरिक्त कामको लागि हामी सँग ५ हजार भन्दा बढि महिला आवद्ध भएका छन । हामीसँग ५ हजार भन्दा बढि रोजगारदाताले सम्पर्क गरेका छन । हामीले रोजगारदातालाई पहिल्है सम्झौता गराएर महिलालाई समस्या पर्न दिका छैनौं ।
तपाई मार्फत रोजगारीमा जानु भएका दिदी बहिनीहरु खुसि हुनुहुन्छ ?
खुसि नै हुनुहुन्छ, किनकी खुसि नभए त मान्छे त्यो ठाँउमा बस्दै बस्दैन । यस्ता काम गर्दिन दुख भयो भनेर आउने खास छैनन । यहाँबाट रोजगारमा गएर धेरै जसोको जीवन राम्रो भएको छ । धेरै महिला त डिप्रेसनको सिकार हुने अवस्थामा पुगेर पनि यहाँ बाट काउन्सिलिङ र रोजगार पाईसकेपछि निकै खुसि हुनुभएका उदाहरुण पनि छन । कतिपय दिदीबहिनी घरायसी कारण तथा आफ्नो काम छोडेर जाने पनि छन । यहाँ भन्दा बाहिर राम्रो काम पाए पनि छोडेर जाने पनि छन ।
२०७७ श्रावण १२ गते १०:३४